Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay haddii uu Bruno Fernandes ciyaarayo kulanka Sabtida ee Wolves – Gool FM
Haaruun January 30, 2020
(Manchester) 30 Jan 2020. Macallinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hadlay war ku saabsan haddii uu Bruno Fernandes ciyaari doono kulanka Sabtida ay wajihi doonaan naadiga aan dabka yar shideynin ee Wolverhampton Wanderers kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Laacibka dhawaan-galka ah ee Manchester United, Bruno Fernandes ayaa diyaar u ah inuu kooxdiisa cusub u safto kulankiisa ugu horreeya kaddib marka uu tijaabada caafimaadka ka gudbo maanta oo Khamiis ah.
Bruno Fernandes ayaa shalay ka soo degay magaaladda Manchester, waxaana qalinka ku duugayaa heshiis afar sanadood iyo bar ah, waxaana hadda la si waydiinayaa haddii Man United ay xiddigan ciyaarsiinayso kulanka Wolverhampton Wanderers kaddib markii xalay uu kaarka cas ka qaatay Nemanja Matic, waxay ka fikiraysaa laacibkii u buuxin lahaa booskaas kulanka Sabtida ee Wolves.
Kaddib kulankii ay Manchester United guul 1-0 ah xalay ka soo gaareen kooxda ay isku Magaalada yihiin ee Manchester City, balse ay farqiga goolasha ku hareen kulankii ka tirsanaa Carabao Cup ayaa Ole Gunnar Solskjaer la weeydiiyay haddii uu ku soo bilaabi doono ciyaarta Wolves ee Sabtida Bruno Fernandes iyo inkale, waxaana su’aashaas ka jawaabay tababaraha Man United.
Ole ayaana yiri: “Aynu heshiiska saxiixno, caafimaadkana dhammayno, wiilku waa taam, waxaanu diyaar u yahay inuu ciyaaro, aynu eegno haddii ay hawluhu dhammaadaan berri. (oo uu kalajeedo maanta oo qamiis ah).”
Yeelkeede, Kooxda Manchester United ayaa hadda kaga jirta kaalinta shanaad jadwalka kala sarreeynta horyaalka Premier League, waxa ayna Sabtida wajihi doonaan Naadiga Wolverhampton Wanderers.